Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): August 2014
at 8/31/2014 07:29:00 PM
Kachin Alliance's hpawng hpe Ya ten American mung dan hta bawng ban hpawng galaw nga ai hku re.
Hpawng hta sadu shang lawm ai ni gaw,,
American mung dan state shagu na dat kasa gawng malai ni hte American mung dan hta nga ai uhpung u hpawng ni yawngadat kasa myit su ni yawng mung sadu shang lawm ai hku re.
USA mung dan hta ya na zawn myu u hpung hkum hkra shang lawm bawng ban sawa ai gaw No.1 lang re ai lam mung chye lu ai.
Matut nna Wunpong myu sha ni yawng shang lawm mai ai Kachin alliance re lam chye lu ga ai.
Gaw da tara hte yaw shada ai lam,Myu sha ni gara hku rawt galu kaba sa wa na lam matut bawng ban nga ai lam,Matut nna yawngamatu akyu nga ai u hpung u hpawng,yawngagawng malai tai wa lu u ga ..matu kyu hpyi myit dum,Hpaji jaw ya na matu shana dat nngai law...
Photo by Kachin alliance's
Kachin Alliance's 2014 National Conference begins in Arlington TX on Aug 30, 2014
EC members and Representatives of KA's network organizations engaged in discussions on Advocacy works and constitution.
Meetings continue in the evening..
ကချင် ကျောက်စိမ်းမှော်လမ်း အစိုးရတပ်များ လုံခြုံရေးယူရန် KIO ကို အသိပေး
at 8/27/2014 12:02:00 PM
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းမှော်ကို လာမည့်အပတ် စက်တင်ဘာ လဆန်း ၁ ရက် တနင်္လာနေ့မှ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖားကန့်လမ်းကြောင်း လုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရတပ် စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများ ရှိလာမည်ကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) အား ကြိုတင်အသိပေး ထားကြောင်း သိရသည်။
နှစ်ဘက် ပူးတွဲ ပဋိပက္ခညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးကော်မတီ ၀င်များ သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့ မြစ်ကြီးနားမှာတွေ့ဆုံချိန် လမ်မကြီးတလျှောက် ဘယ်ညာ အထဲသို့ ၃ မိုင် မှ ၅ မိုင်အကွာအဝေး ထိ အစိုးရတပ်များ လုံခြုံရေးယူရန် ပြောခဲ့သည်။
KIO ဘက်က ကော်မတီဝင် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အင်ဖန်နော်ဘို (Lt-Col Nhpang Naw Bu) အခုလို KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ ရှင်းပြပါသည်။
“သူတို့ပြောတာ အဲဒီဖားကန့်လမ်းဖက်ကို ဒီလ စက်တင်ဘာ လဆန်းကနေ ကုမ္ပဏီတွေ တရားဝင် အလုပ်ဝင်တော့မယ် ဖြစ်တာကြောင့်.. သူတို့အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေ လမ်းမကြီး တစ်ဖက်တချက် အထဲကို ၃ မိုင် မှ ၅ မိုင် ထိ၊ ကျန်တာက လမ်း တံတားတွေအတွက် လုံခြုံရေးယူသွားကြမယ်လို့ ဆိုလာရာ ကျနော်တို့က မဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဘူး၊ ကျနော်တို့ရဲ့အထက်က ဗဟိုကော်မတီကို တင်ပြပေးမှာပါ ဟု ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။”
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်မဟာ (၂)၊ တပ်ရင်း (၆) နယ်မြေ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်း ယခုလို အစိုးရတပ်များ လမ်းလုံခြုံရေးယူလာခြင်းကြောင့် ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုများမဖြစ်အောင် နှစ်ဘက်တပ်များ ရှောင်ပေးကြဖို့လည်း KIO ကို အစိုးရဘက်က တင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ယခုအချိန်ထိ အဆိုပါတင်ချက်ပေါ် KIO ဌာနချုပ်မှ တုန့်ပြန်ချက် တစုံတရာ မပေးသေးကြောင်း KIO အရာရှိများ ဆိုပါသည်။
သို့သော်လည်း KIO ဘက် ပဋိပက္ခညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးကော်မတီ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်တောင် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် သြဂုတ် ၁၄ နေ့က ဖားကန့်လမ်းကြောင်း နမ္မတီးမြို့ အနည်း KIA တပ်ရင်း ၁၁ ဌာနချုပ်သို့ လာရောက်ပြီး အစိုးရနှင့် ရရှိထားသော စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ သဘောတူညီထားချက်များကို ရှင်းပြခဲ့သည်ဟု ဒုဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘို ပြောပါသည်။
Burma Army unit surrendered to the Shan State Army
at 8/27/2014 10:59:00 AM
သောင်းကျန်းသူ သူပုန်တပ်ဖွဲ့မှ တပ်သားအချို့ ရှမ်းတပ်မတော်သို့ အလင်းဝင်ရောက်လာ
Two officers and 16 soldiers fromaBurma Army unit surrendered to the Shan State Army on June 7, 2014. They said they did not want to fight and die meaninglessly as forced by their senior officer. All their weapons were handed to the SSA. The SSA supported them with money and helped them reach the Thai border and find employment. These Burmese soldier are now happily working and also in contact with their relatives.
source: Wa News
at 8/27/2014 12:11:00 AM
ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) ဌာနချုပ် စခန်းထိုင်ထားတဲ့ ဖားကန့် -ဥရု ဆိုင်းရာ ဒေသကို မနှစ်က မြန်မာအစိုးရ တပ် အင်အား အလုံးအရင်း နဲ့ စစ်ကြောင်းထိုး ၀င်ရောက်လာတဲ့ အတွက် တိုက်ပွဲကြီး များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ဆိုင်းရာကျေးရွာ တစ်ဝိုက်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ အများပြည်သူ ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် တပ်ရင်း(၆) စခန်းကုန်းကို ထားခဲ့ပြီး ခေတ္တ ရှောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရှောင်ပေးခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာတပ် က စခန်းကုန်းကို ၀င်ရောက်တပ်စွဲထားခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီနောက်တော့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ရသမျှ အကုန်သိမ်းကြုံး ပြီး ယူသွားကြပါတယ် ။ အိမ်အမိုး သွပ်ခွာတဲ့သူက ခွာ ၊ အိမ် ထရံခွာတဲ့သူက ခွာ ၊ အိမ်သာ ခွက်ပါ မကျန် အကုန် သယ်ယူသွားကြပါတယ် ။ ဘယ်လောက်ထိ စည်းကမ်း မရှိ ငတ်ပြတ် နေတဲ့ စစ်တပ် လဲ ဆိုတာ ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် ။ အဲဒီတုန်းက ၀င်လာတဲ့ စစ်ကြောင်းတွေက လက်ရှိ ဖားကန့် ဗျုဟာကုန်းမှာ စခန်းထိုင်ထားတဲ့ တပ်မ (၆၆) နဲ့တပ်မ (၁၀၁) တပ် တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော နာမည်ကြီး သူခိုးတပ် တွေပေါ့ဗျာ ။
(Kachin land news)ဒူကထောင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မှုးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းစတင်
at 8/25/2014 07:53:00 PM
Lachid Kachin ,with Mungmyit Bunghkua
Kachin, Mungdaw , Myitkyina mare da ju, Du Kahtawng NiaNang Hpam Pat Jasan Gasat masing Magam Bungli Hpang Sai.
Burmese TV Weekly Magazine - August 23-24 Program-VOA
at 8/25/2014 02:23:00 AM
Interview with Kachin Democratic Party Chairman Duwa Gum Grawng Awng Hkam, talk about the upcoming elections, ongoing peace talks between government and ethnic minority groups, China's intervention in the peace talks in Myanmar, American English lesson: Idioms and Idiomatic expressions -
Mung masa pati hte Rawt malan hpung ni myit mang shabawn ra
at 8/25/2014 02:14:00 AM
“ Ndai aten hta mung masa pati hte rawt malan hpung ni myit mang shabawn ra ai aten du nga sai”
jinghpaw wunpawng myu sha demokresi ginrun pati
Myen mung gaw 2008 gaw da tara upadi hkrang pru wa ai hte rau, 2010 ra lata poi ngut ai hpang moi na hpyen dap up hkang ai gum shem hpyen du ni n-teng man ai hku dang la lu nna asuya hkrang ngu gaw gap dat masai. Mung kan ting garu nga ai gaw Myen mung dan hta demokresi masa galai shai ai lam ning gam tsaw wa sai nga nna gajai nga ma ai. Teng teng gaw Myen mung dan gaw jet ai “federal democracy” mung dan byin tai lu na matu ya hkyak hkyak hta myu sha baw sang ni hte kaga demokresi shamu shamawt hpung hte mung masa pati ni garu jawng taw nga ai aten mung rai nga mali ai.
Myen mung dan hta ya hte ndai laman myu sha rawt malan hpung ni hte Myen asuya simsa hpung ni hkrum zup bawng ban ai hta shi laika ni hkaneMyen asuya ni Jet ai hpedare mung hpawm gaw gap na lam hpe bai tsun garu nga masai, teng gaw hpa rai ta? Asuya ni jum tawn ai shi ga dap hkan ndai lam hpe tsep kawp ntsun shapraw ai hpe mu lu na rai nga ai. Shaloi shanhte tsun ai hpedare mung hpawm mung dan gaw de lam hpe teng gaw hkap la nga ma ni? Myit yu hpa langai rai nga ai. Anhte Myu sha baw sang niagawng malai tai nna mung dan lam, myu sha lawt lam hpe shakut shaja nga ai myu sha rawt malan hpung ni hte myu sha baw sang mung masa pati ni ndai lam hpe sadi maja ra na rai nga ai. Bai nna ndai lam hpe manya hkam nna, baw gum hkam nna lawan ladan kam hpa let shatin shapun rai nna ganaw bang mat na lam hpe n-galaw na ma ai ngu nna kam hpa nga ga ai.
Myen asuya hte bawng ai lam gaw madung rai nga ai, rai tim madung mung masa mang hkang hpe hparan lu na matu mahtai kaja tam ga nga jang tara shang nga ai mung masa pati ni hte 2008 ning gaw da ai mung dananing pawt ning hpang gaw da tara hpe ning hkap gasat ai majaw pati mying garai nbang shi ai mung masa wuhpung wuhpawng ni hte pati ni hpe mung gum hpawn nna n-gun jawm gahkyin let lagaw lahkam htawt ai lam nshut hkra jawm myit mang lu na lam gaw grai ahkyak nga ai. Jet ai “federal democracy” mung hpawm mung dan hpe gaw gap lu na matu gaw lahta na myit mang ai lam gaw grai ahkyak kaba langai rai nga ai ngu nna chye na hkawn hkrang lu nga ga ai. Myen gaw dai ni du hkra rai tim, jet ai “federal democracy”mung dan gaw de na lam hpe nhkap la ma ai, hpa majaw nga yang jet ai “federal democracy” mung dan gaw myu sha baw sang ni hte ahkaw hkang maren mara lu shangun ai masing re majaw, dai zawn byin wa na hpe nra sharawng ai lam, nkam byin shangun ai lam niamarangerai nga malu ai.
Dai re majaw ndai aten hta mung masa pati hte rawt malan hpung ni myit mang shabawn ra ai aten du nga sai.
ဖားကန့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး နှိုးဆော်ဆိုင်းဘုတ်များ ဖျက်ဆီးခံရ
at 8/23/2014 03:33:00 AM
Lachid Kachin's status.
တိုက်ဖျက်ရေး နှိုးဆော်ဆိုင်းဘုတ်များ ဖျက်ဆီးခံရ
ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် နှိုးဆော်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်များ ဖျက်ဆီးခံနေရကြောင်း သိရှိရပါသည် ။ ယခု ပြု လုပ်နေ သော ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေး စီမံကိန်းအား KIO, အပါအ၀င် ကချင်ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူးယစ်ဆေးဝါး ကို အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ် အနေနဲ့စီမံကိန်းချပြီး တိုက်ဖျက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ။ ယခု ဖျက်ဆီး ခံရသော နေရာများ မှာ ဖားကန့် မြို့ နယ်အတွင်း ရှိ နမ့်မဖစ် ကျေးရွာ ထဲမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။